Nahenan’i Kambodza ny isan’ny andro tsy fiasana ho an’ny daholobe mba hisarihana asa saingy mampanahy ny mpikatroka ho manimba ny demokrasia izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2019 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, 日本語, Română , Esperanto , English
Hetsika nankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona tamin'ny 10 Desambra 2015 tao amin'ny Kianjan'ny Fahalalahana tany Phnom Penh. Nahavory olona sy vondron'olona mitaky ny fiarovana bebe kokoa ny zon'olombelona ao Kambodza nandritra ny taona maro ny hetsika fanao isan-taona. Sary avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Foibe ho an'ny zon'olombelona any Kambodza.
Namoaka didim-panjakana hampihenana ny isan'ny andro tsy hiasana izay miisa 28 ao amin'ny firenena ho 22 ny governemanta Kambodziana raha namaly ny fitakian'ny vahoaka amin'ny sehatry ny fihariana. Nilaza ny manampahefana fa hampiakatra ny fifaninanana ao amin'ny firenena ity fanapahan-kevitra ity saingy manahy ny vondrona sasany fa mety hanimba ny fahatsiarovan'ny vahoaka ny hetsika manan-tantara lehibe izany.
Ny andro tsy fiasana miisa enina izay ho esorina amin'ny taona 2020 dia ny 20 Mey Andro Fahatsiarovam-Pirenena (Androm-Pirenena Fankahalana, ahatsiarovana ny fitondrana Komonista Khmer Rouge teo aloha), ny 1 jona Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Ankizy, ny 23 Oktobra Andro Fifanarahana tany Paris ho amin'ny Fandriampahalemana, ny 10 Desambra Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona, ary ny roa amin'ireo telo andro hankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny mpanjaka.
Fahatsiarovana ny fiafaran'ny ady tany Kambodza tamin'ny taona 1991 ny Andron'ny Fifanarahana tany Paris ho amin'ny Fandriampahalemana ary manamarika ny fizotran'ny firenena mankany amin'ny demokrasia. Nametraka ny rafitry ny fananganana fanjakana demokratika maoderina ary maneho taratra ny firaisan'ny antoko politika lehibe hanohy ny fanavaozana politika milamina io andro io.
Nanazava i Ek Tha, mpitondratenin'ny Filankevitry ny Minisitra fa valin'ny fangatahana nataon'ny mpampiasa an-tanindrazana sy ny mpampiasa vahiny mba hampinenana ny andro tsy fiasana ho an'ny daholobe ilay didim-panjakana.
Satria tian'ny governemanta mba hifaninana sy hisarika ny fampiasam-bola nasionaly sy iraisam-pirenena ny Fanjakana no antony… Noho izany mba ahafahan'izy ireo [olom-pirenena] mandray anjara amin'ny fananganana sy ny fampandrosoana an'i Kambodza hiroboroboany kokoa.
Saingy niangavy ny handinihana izany indray i Pav Sina, filohan'ny Fiombonan'ny Sendikan'ny Mpiasa satria mety hisy fiantraikany amin'ny tombotsoa raisin'ny mpiasa ny fihenan'ny andro tsy fiasana.
Miara-mifanakalo hevitra ny sendika mba hahitana ny fomba hangatahana any amin'ny governemanta ny handinihana indray ny fanapahan-kevitr'izy ireo tamin'ny fampihenana ny andro tsy fiasana ho an'ny daholobe satria ho very ny tombotsoan'ireo mpiasa.
Kambodza no iray amin'ireo firenena vitsy mankalaza ny Andron'ny Zon'olombelona ho toy ny andro tsy fiasana ho an'ny daholobe. Hitan'ny sasany ho fombafomba fivadihana amin'ny fikasan'ny firenena hametraka fanavaozana demokratika ilay fanapahan-kevitra hanaisotra izany tamin'ny lisitry ny andro tsy fiasana.
Voampanga ho nanampim-bava ireo tsy mitovy hevitra aminy ny governemanta Kambodziana tamin'ny alàlan'ny fandràrana sy ny fandravana ny antoko mpanohitra lehibe dia ny Antoko Fanavotam-Pirenena ao Kambodza (CNRP). Nametraka hetra sy saram-pahazoan-dàlana ny sehatra fampitam-baovao sasany ihany koa ny governemanta izay nofaritan'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ho tsy rariny fa misy ambadika politika. Ho valin'izany, nolazain'ny manampahefana fa mifandray amin'ny fahefana vahiny izay nolazaina fa “mpiray tsikombakomba” hanozongozonana ny governemanta ny mpanohitra sy ny vondrona fiarahamonim-pirenena sasany .
Na dia neken'ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena aza ny tanjon'ny fampihenana ny isan'ny andro tsy fiasana dia naneho ny ahiahiny izy ireo fa mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahalalan'ny vahoaka momba ny hetsika izay nametraka ny fototry ny demokrasia amin'ny fanorenana ny firenena izany.
Nilaza i Chak Sopheap, tale mpanatanteraka ao amin'ny Foibe ho an'ny Zon'olombelona Kambodziana fa ho “hirika very amin'ny famaranana ireo hevitra mifanipaka” amin'ireo hetsika sy lanonana mampiady hevitra ny fanesorana ny sasany amin'ny andro tsy fiasana.
Amin'ny ankapobeny, na ahoana na ahoana ny fomba hametrahana ny andro tsy fiasana, enga anie mba ho ao anatin'ny saintsika rehetra hampandrosoana ny firenena maharitra sy am-pilaminana ny fanahin'ny fanajana sy ny fiarovana ny zon'olombelona, ​​ary tahaka izany koa ny filàna hisian'ny fampihavanam-pirenena sy ny fahaleovantenam-pirenena.
Nilaza i Soeung Sen Karona, mpitondratenin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Adhoc fa famantarana iray hafa amin'ny famelezan'ny governemanta ny demokrasia ny didim-panjakana .
Maneho ny tsy fahavononan'ny governemanta hampiroborobo intsony ny demokrasia ny fanesorana ny Andro Fifanarahana ho amin'ny Fandriam-pahalemana tany Paris sy ny Andro ho an'ny Zon'olombelona amin'ny lisitry ny andro tsy fiasana ho an'ny daholobe .
Nanolo-kevitra ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena sasany fa azo atambatra fa tsy foanana tanteraka ny andro fety sasany. Nanome toky azy ireo ny tompon'andraikitry ny governemanta fa mbola hisy hatrany ny andro fahatsiarovana ireo andro ireo ary mbola afaka mikarakara hetsika fankalazana ireo fotoana manan-tantara ireo ihany ny vahoaka.